Liiska Qoyska ee Dib u Furida Dugsiga | Boston School Finder
Noocyada Dugsiyada Kuyaala Boston
Sidee iyo Goorta la Codsado Dugsiyada
Sida La iskaga Diiwaangeliyo BPS
Sida loo Codsado Dugsiyada Imtaxaanka
Sida Loo Dalbado Dugsiyada Charter ka ah
Waxa aan Samayno
Liiska Qoyska ee Dib u Furida Dugsiga
Sabab la xariirta aafada hadda jirta ee Korona fayras, sanad dugsiyeedka 2020-2021 wuxuu noqon doonaa sanad aysan asagoo kale waligood arag qoysasku. Waxaan bixinay jawaabaha qaar ka mid ah su'aalaha ugu badan ee aan ka helnay qoysaska.
Fadlan ogsoonoow sabab la xariirta inaan ku jirno aafada cudurka, in xaaladu si degdeg ah isku badali karto sabab la xariirta xog cusub ama tilmaamo cusub oo ka yimaada saraakiisha federaalka, kuwa gobalka, ama kuwa deegaanka. Waxaan ku boorinaynaa qoysaska inay xariir joogto ah oo u dhaw la yeeshaan dugsiyadooda si ay u helaan xogtii ugu danbaysay.
Goorma ayaa dib loo furayaa dugsiga cunugayga sanadkaan?
Gobalka Massachusetts, taariikhaha dib u furida sanad dugsiyeedka ayaa kala duwan degmooyinka mararka qaarna, xataa dugsiyada. Waxaa intaas dheer, dhammaan degmooyinka dugsiyada waxaa loo sheegay inay qasab tahay inay diyaarshaan saddex qorshe oo dugsiga dib loogu furaayo.
Waa maxay saddexda nooc ee qorshayaasha dib u furida dugsiyada?
Oonleen: Oo sidoo kale loo yaqaano waxbarashada fogaanta ama waxbarashada aad iskaa u akhrisanayso, qorshayaasha waxbarashada oonleenka ah waxay ka dhigan yihiin inaan ardaydu imaan doonin dhismaha dugsiga. Ardayda ayaa caadiyan wax ku baranaaya aalad, sida Chromebook, iPad, ama taableet ama aalad kumbuyuutar ah.
Toos: Caadiyan, qorshaha tooska ah waa in si buuxda, oo caadi ah dugsiyada loo furo ayadoo casharada maalintii si buuxda oo dhiganaayo. Shuruudaha maaskarada, habraacyada nadiifinta, nidaaminta kuraasta, shaqooyinka iyo jadwalada wax laga badelay, iyo shuruudaha kale ee badqabka ayaa loo diyaarshay dhammaan ardayda iyo shaqaalaha si looga hortago ama loo yareeyo suuragalnimada in korona fayras ku faafo dugsiyada.
Iskudhaf: Qorshaha iskudhafan, ardayda ayaa helaaya casharka oo lagu bixinaayo iskudarka oonleenka iyo waxbarashada tooska loo imaanaayo fasalka. Ardayda ayaa xaadiri kara fasalka dhawr maalmood ama asbuuc markiiba, kadibna maalmo kale ama asbuuc ku dhiganaaya oonleenka. Sida waxbarashada iskudhafan loo dhigo waxay ku xiran tahay dugsiga.
Waxbarashada oonleenku ma waxay la mid tahay waxbarashada guriga lagu dhigto?
Maya. Qorshaha waxbarashada oonleenka ah waa casharo ardaygu qaadanaayo asagoo guriga jooga, laakiin ardaygaagu wali wuxuu ka diiwaan gashanaan doonaa dugsi dawladeed ama mid gaar loo leeyahay. Casharada waxaa abuuraaya oo dhigaaya macalimiinta dugsigaaga laakiin waxaa lagu bixinayaa oonleen ahaan, taasoo ka dhigan inaan cunugaagu tagaynin xarunta dugsiga.
Gudaha Massachusetts, qoysasku waxay ku siin karaan carruurtooda waxbarasho guriga loogu dhigo—gooni ah oo ka madax banaan dugsiga dawlada ama gaarka loo leeyahay. Tan waxaa loo yaqaan "waxbarasho guri." Markaad doorato in guriga wax lagu baro ilmahaaga, barnaamijka waxbarashada guriga lagu dhigto (sidoo kale loo yaqaano qorshaha waxbarashada) waa inuu horay u ansixiyaa kormeeraha guud ama guddiga dugsiga ee degmada aad dagan tahay. Dadka reer Boston, tani waxay ka dhigan tahay in qorshaha waxbarashadda ilmahaaga ay qasab tahay in loo soo gudbiyo uuna oggolaado Xafiiska Dugsiyada Dadweynaha Boston ee Fursadaha Balaaran ee Waxbarashada.
Wixii macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan shuruudaha waxbarashada guriga looga baahan yahay ee qoysaska, fadlan booqo Hagahaan kooban ee Tusmada Bilaabida Waxbarashada oo kasoo baxay Ururka Waxbarashada Guriga lagu dhigo ee Massachusetts (MHLA). MHLA waa urur khayri ah oo u qareemid iyo waxbarasho baxsha kaasoo taageera waxbarashada guryaha lagu dhigto oo badal u ah dugsiyada dawlada ama kuwa gaarka loo leeyahay.
Wixii xog dheeraad ah oo ku saabsan bilaabista hanaanka codsiga waxbarashada guriga lagu dhigto gudaha Boston, fadlan booqo bogga waxbarashada guriga lagu dhigto ee Xafiiska Fursadaha Balaaran ee Waxbarashada ood ka helayso webseetka BPS. Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah, fadlan iimeel u dir homeschooling@bostonpublicschools.org.
Goorma ayuu cunugaygu ku laabanayaa dugsiga si toos ah?
Xogtaan ayaa ku kala duwan dugsiyada. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan qoysaska inay xogtaan ka hubiyaan dugsigooda gaarka ah. Baroofayladeena Dugsiga waxaa hadda ku jira qayb ay ku jiraan Taariikhda Biloowga, Nooca Qorshaha Dib u Furida, iyo lifaaqasanad dugsiyeedka oo la xariira Qorshaha Dib u furida ee Dugsigaas, sida hoos ka muuqata:
Dugsigaygu mar kale ma xiri doonaa inta lagu jiro sanadkaan sidii uu sameeyay xiligii gu'ga?
Waa suurtagal in dugsiyada gaarka ah ama degmooyinka oo dhan ay xiraan muddo gaar ah sabab la xariirta isku gudbinta korona fayras ama dadka deegaanka ah cudurka laga helo. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan qoysaska inay xariir dhaw la yeeshaan dugsiyada ayna la socdaan amarada kasoo baxa waaxaha caafimaadka ee maxaliga ah iyo kuwa gobalka ee la xariira xirista dugsiyada.
Maxaa dhacaaya haddii cunugaygu leeyahay IEP ama qorshaha 504, ama uu u baahan yahay adeegyada kale ee waxbarashada gaarka ah ama Barashada Ingiriiska?
Fadlan toos ula xariir dugsigaaga, maadaama dugsiyada qaar iyo degmooyinka qaar ayaa lahaan kara dookhyo gaar ah oo waxbarashada tooska ah lagu siinaayo ardayda u baahan adeegyada gaarka ah.
Xagee ayaan ka helayaa xog dheeraad ah oo ku saabsan dib u furida?
Waxaad gujin kartaa lifaaqa si aad u aragto Qorshaha Dib u furida Dugsigaa adoo galaaya Bogooda halkaan ee webseetkeena.
Qofkee ayaan la xariiri karaa haddii aan wali su'aalo ka qabo dugsiga cunugayga sanadkaan?
Ardayda dhigta dugsi BPS ah, waxaad wici kataa Laynka caawimaada ee BPS oo ah 617-635-8873. Dugsiyada aan ahayn BPS, fadlan la xariir dugsigaaga si toos ah; xogta wicitaanka waxaa laga heli karaa dhammaan Borofaylada dugsiga ee webseetkeena.
Xagee ayaan ka heli karaa xog dheeraad ah oo ku saabsan xogihii ugu danbeeyay ee korona fayras gudaha Massachusetts?
Massachusetts: Wixii xog dheeraad ah oo ku saabsan korona fayras, fadlan booqo bogga Xogihii ugu Danbeeyay ee Massachusetts COVID-19. Erayga COVIDMA qoraal ahaan ugu dir 888-777 si aad u hesho digniinihii ugu danbeeyay ee korona fayras gudaha Massachusetts oo taleefankaaga lagusoo diraayo. Qoraal ahaan ugu dir erayga COVIDMAESP 888-777 si aad u hesho Fariimaha oo ku qoran Isbaanish.
Boston: Wixii xog dheeraad ah oo ku saabsan korona fayraska ka jira magaalada Boston, fadlan booqo bogga Cudurka Korona fayras (COVID-19) ee ka jira Boston. Qoraal erayga BOSCOVID ugu dir 888-777 si aad u hesho digniinihii ugu danbeeyay ee korona fayras gudaha Boston oo taleefankaaga lagusoo diraayo. Fariimaha digniinta ah ee ku saabsan korona fayraksa ka jira Boston ayaa sidoo kale lagu heli karaa 10 luuqado kale; fadlan booqo bogaan si aad u hesho xog dheeraad ah.
Baaritaanka COVID-19: Haddii aad u baahan tahay in lagu baaro, fadlan booqo Bogga Get Tested MA!, oo aad ka dhex helayso aalada kuu sheegaysa goobaha lagu baaro COVID-19.
©2021 Boston School Finder.